20 qalab oo qof walba uu jeclaan doono
Bogga horeFasax Qalabka
1. Apple Watch Taxanaha 7
Ku haboon: Milkiilaha iPhone kasta.
Iyada oo la adeegsanayo Apple Watch S7 smartwatch, waxaad ku xakameyn kartaa muusigga, waxaad ku bixin kartaa meesha hubinta, diri kartaa fariimaha oo wici kartaa adigoon iska bixin taleefankaaga casriga ah. Waxaan bixinaa xargaha la isweydaarsan karo, muuqaal had iyo jeer ah iyo muuqaalo fayoqab oo buuxa oo ka bilaabma garaaca wadnaha iyo heerarka ogsijiinta dhiiga ilaa tirinta tilaabada.
Jiilka toddobaad ee Apple Watch waxa uu leeyahay shaashad ka weyn oo leh geeso cidhiidhi ah, dallad degdeg ah iyo ilaalin la isku halayn karo oo IPX6 ah. Saacaddu kama cabsanayso roobka culus, waxaad si tartiib ah u dhaqi kartaa gacmahaaga, laakiin ma istaagi doonaan dabaasha barkadda. Farimaha hadda waxa lagu qori karaa kiiboodhka farsamada gacanta oo dhamaystiran. Madax-bannaanida iyo xawaaraha qalabka ayaa kordhay marka loo eego qaabkii hore.
Ku habboon qof kasta : qof kasta, iyada oo aan laga reebo.
Tracker Fitness Xiaomi, hadiyad aad u fiican ma aha oo kaliya kuwa jecel isboortiga, laakiin sidoo kale qof kasta oo casri ah. Marka laga soo tago awoodaha jirdhiska sida cabbirka garaaca wadnaha, heerarka ogsijiinta dhiigga iyo raadraaca hurdada, Mi Band 6 waxay baahin kartaa ogeysiisyada taleefanka casriga ah waxayna kuu oggolaaneysaa inaad maamusho muusigga. Jiilka lixaad ee qalabka, muuqaalka waa la cusboonaysiiyay iyo tayada bandhigga waa la hagaajiyay.
Qalabku maaha mid u qurux badan oo u shaqeeya sida Apple Watch 7, laakiin waxa uu taageeraa IOS iyo Android labadaba, kharashkiisu aad uga yar yahay oo wuu sii dheer yahay iyada oo aan dib loo dallacin, ilaa laba toddobaad.
Ku haboon: muusikada jecel iyo ciyaartoyda.
Sameecado-madaxeedka bilaa-waayirka ah ee wanaagsan: shaqaynaya, raaxo leh oo qurxoon. Waxay taageeraan tignoolajiyada dhawaaqa ku wareegsan si loogu kordhiyo cabbirka muusiga iyo filimada. U adkaysta roobka iyo dhididka inta lagu jiro jimicsiga adag. Waxay ku shaqeeyaan ilaa lix saacadood hal kharash iyo ilaa 30 saacadood iyagoo dib u buuxinta kiiska. AirPods 3 waxaa si gaar ah loogu talagalay tignoolajiyada Apple, laakiin sidoo kale waxay la jaan qaadayaan aaladaha Android.
Ku habboon: qof kasta oo guriga ku dhegeysta raadiyaha, muusiga ama podcasts.
Ku hadla yar oo leh cod saafi ah iyo caawiye cod ku dhex dhisan. Qalabku wuxuu ka jawaabaa amarada afka ah wuxuuna la falgalaa adeegyada Yandex. Mid ka mid ah ayaa kaliya in la weydiiyo, oo tiirku wuxuu shidi doonaa barnaamijka raadiyaha ee la doonayo ama muusigga, iyo sidoo kale dooro heeso cusub oo dhadhanka isticmaalaha. Qalabku ma dhagaysan karo oo kaliya, laakiin sidoo kale wuxuu kaga jawaabi karaa su'aalaha cod bini'aadam ah.
Ku habboon dhammaan kuwa jecel qalabka.
Iyada oo leh baytari dibadda ah oo leh awood 20,000 mAh ah, way sahlanaan doontaa in la buuxiyo ma aha oo kaliya casriga, saacadaha ama taleefoonnada dhegaha, laakiin sidoo kale kiniin iyo xitaa laptop. Powerbank wuxuu keenaa koronto wadarta ilaa 100 watts. Waxay leedahay laba dekedood oo USB-A ah oo wax-soo-saarka ah iyo laba dekedood oo USB-C ah oo wax-soo-saarka iyo soo-gelinta ah.
Haddii aad isticmaasho laba wax soo saar isku mar, awoodda ugu badan ee hal Nooca -C waxay ku koobnaan doontaa 65W, iyo Nooca – A, 30W. Blade lafteedu waxay ku dallacaysaa 90 daqiiqo iyadoo la isticmaalayo adabtarada korantada ee 65W. Bandhig dhijitaal ah ayaa lagu rakibay kiiska oo wata macluumaadka ku saabsan heerka batteriga, wakhtiga dallacaadda iyo awoodda.
Ku haboon: Dadka ku shaqeeya xogta muhiimka ah.
Wadad dibadda ah oo leh mug weyn, kaas oo ku filnaan doona kaydinta xog kasta iyo kaydinta macluumaadka dhijitaalka ah. WD My Passport waa furaha sirta ah lagu ilaaliyo, degdega in loo duubo, waana fududahay in la isticmaalo.
Ku haboon: bloggers iyo taageerayaasha kaliya ee toogashada casriga ah.
DJI Osmo Mobile 5, gimbal casriga ah oo si fudud loo qaadi karo. Qalabku wuxuu bixiyaa duubid fiidyow oo siman, wuuna leexan karaa shayada ku jira jir-ka oo dalaci karaa taleefanka. Waad ku mahadsan tahay naqshadda laalaabi karo, qalabku wuxuu si raaxo leh ugu habboon yahay jeebkaaga ama boorsadaada.
8. JBL eeda 5
Ku habboon: kuwa jecel muusiga iyo hawlaha bannaanka.
Af-hayeenka 40W ee la qaadi karo oo leh guryo aan biyuhu lahayn oo waara iyo tayada codka wanaagsan. JBL Charge 5 waxay si fudud u wareejin doontaa ma aha oo kaliya daadinta, laakiin sidoo kale quusin buuxda ee biyaha. Tiirku waxa uu taageeraa xidhiidhka casriga ah ee Bluetooth 5.1. Laba qalab oo isku mid ah ayaa lagu dari karaa lammaane stereo ah, iyo qaabka mono-ka waxaa suurtogal ah in lagu xiro ilaa boqollaal qaybood, tusaale ahaan, xaflad weyn.
Kharashka 5 wuxuu ku dallaci karaa aaladaha batari 7,500 mAh wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad dhageysato muusikada ilaa 20 saacadood. Marka la barbardhigo qaabkii hore, kani wuxuu noqday mid aad u xoog badan 10 W, si fiican ayuu u gudbiyaa soo noqnoqoshada sare waxaana si la isku halleyn karo looga ilaaliyaa boodhka iyo ciidda.
Ku habboon: qof kasta oo runtii wax badan akhriya.
Akhristaha khafiifka ah iyo kuwa khafiifka ah oo leh muuqaal E-khad cajiib ah, qoraalka kaas oo ku dhow yahay mid aan kala saari karin warqadaha ku daabacan. Jiilka hadda jira ee Kindle Paperwhite wuxuu leeyahay iftiiminta gadaal ee la wanaajiyey taasoo ka dhigaysa mid ku raaxaysan in mugdiga lagu akhriyo. Xusuusta ku dhex jirtana waxay ku filan tahay inay boqollaal buug ku qaado jeebkaga. Intaa waxaa dheer, qalabku kama cabsanayo biyaha, kama qayb qaadan kartid shaqooyinka aad jeceshahay xitaa musqusha.
Ku habboon: Qof kasta marka laga reebo kuwa neceb Apple neceb.
A casriga ah ee khadka cusub ee iPhone oo leh muraayad OLED ah oo la cusboonaysiiyay iyo processor A15 Bionic awood leh. Apple waxay hagaajisay xawaaraha iyo kamaradaha. Kamarada ugu weyn waxay ka kooban tahay laba qaybood oo 12 megapixel ah. Labaduba waxay ku qalabaysan yihiin xasilinta isbeddelka dareemayaasha si si wax ku ool ah loola dagaallamo blur dhaqdhaqaaqa.
Habab sawireed cusub oo leh filtarrada la beddeli karo ayaa diyaar u ah toogashada, iyo sidoo kale qaabka shaleemada ee muuqaalka. Kamarada hore waxay kaloo taageertaa dhammaan sifooyinkan. Qalabku si fiican ayaa loo soo ururiyey, u muuqda mid wanaagsan oo sahlan in la isticmaalo.
Ku habboon: Isticmaalayaasha ka door bida aaladaha Android wax soo saarka Apple.
Galaxy S21 Ultra waa hadiyad soo dhawayneed oo loogu talagalay taageere Android run ah sida iPhone 13 loogu talagalay taageeraha Apple. Kani waa moodel leh shaashad 6.8 ‑ ‑ ‑ AMOLED ah oo aad u wanaagsan kaas oo taageera heerarka dib u soo kicinta ilaa 120Hz. Waxqabadka waxaa mas'uul ka ah processor-ka Exynos 2100. Marka la barbar dhigo jiilkii hore, chip-kani waa 30% dhakhso badan oo tamar badan.
Kaamirooyinka tayada sare leh waxay mudan yihiin fiiro gaar ah: 108 megapixel sensor main, laba lenses telephoto 10 megapixel ah oo leh saddex iyo toban jeer zoom indhaha ah, iyo sidoo kale 12 megapixel module xagal ballaaran. Intaa waxaa dheer, waxaa jira dareenka qoto dheer ee goobta iyo autofocus laser.
Waxa ugu fiican: Qof kasta oo raadinaya laptop is haysta oo leh macOS.
MacBook Air oo leh muuqaal Retina, mid ka mid ah kombiyuutarada laptop-yada ugu fiican ee suuqa. Khafiif ah oo khafiif ah, waxay ku faantaa kaliya maaha buuxin xoog leh oo leh Processor Apple M1 awood leh, laakiin sidoo kale madax-bannaani ilaa 18 saacadood ah. Waxay isticmaashaa shaashad 13.3-inch ah oo leh xallinta 2,560 x 1,600 pixels. Waxay leedahay gamut midab ballaaran oo tayada sawirka cajiibka ah.
Habkani wuxuu leeyahay 8 GB oo ah xusuusta degdega ah ee isku dhafan, taas oo muujinaysa waxqabad wanaagsan; waxay ku filnaan doontaa badi hawl maalmeedka. SSD-gu waxa uu ku jiraa laba cabbir, 256GB ama 512GB.
Waxa ugu fiican: Qof kasta oo raadinaya laptop-ka Windows oo kooban.
ASUS ZenBook 13 waa beddelka la awoodi karo oo ka beddelan kara Macbook Air kaas oo isku dara cabbirka yar iyo awoodda gudaha. Laptop-ku wuxuu leeyahay processor-ka AMD Ryzen 5 5500U lix-core oo leh sawiro isku dhafan iyo 8GB oo RAM ah. Buuxintan ayaa ku filan in lagu socodsiiyo codsiyada caanka ah. Awooda batteriga ayaa ku filan ilaa 16 saacadood oo nolosha batteriga ah.
Qaabka ugu muhiimsan ee laptop-ka, 13.3 ‑ ‑ ‑ OLED‑ shaashad leh xallinta Full HD. Shaashadda waxay muujinaysaa sawir qani ah oo dhalaalaya, taasna waxaa kaalmeeya tignoolajiyada heerka firfircoon ee HDR.
Ku habboon: Taageerayaasha Sony iyo dhammaan taageerayaasha ciyaaraha shaashadda weyn.
PlayStation 5 waxay ku fiican tahay kuwa raadinaya inay helaan console-koodii ugu horreeyay iyo kuwa raadinaya inay ka cusboonaysiiyaan moodal duug ah si ay si raaxo leh ugu ciyaaraan xallinta 4K. Qalabka waxaa lagu heli karaa laba nooc: Standard leh Blu-ray Drive iyo Digital Edition oo aan darawalnimo.
Console-ku wuxuu leeyahay 825 GB SSD aad u dheereeya kaas oo ka caawiya horumariyayaashu inay abuuraan goobo waaweyn oo leh ku dhawaad ​​la dejin iyo kala-guur aan la aqbali karin. Awoodda processor-ka PlayStation 5 ayaa ku filan tafatirka sare iyo saamaynta muuqaalka iyo dhawaaqa cajiibka ah, kuwaas oo aan wali ku jirin jiilkii hore ee console-ka.
Ku habboon: taageerayaasha mashaariicda Microsoft iyo dhammaan taageerayaasha ku ciyaarista shaashadda weyn.
Qalabka calanka ee Microsoft iyo sanduuqa set-top ugu awooda badan suuqa. Awoodeeda ayaa ku filan xitaa ciyaaraha tignoolajiyada ugu sarreeya. Xbox Series X ayaa afar jeer ka awood badan kuwii ka horeeyay.
Sanduuqa set-top wuxuu leeyahay 1 qalab kaydinta TB oo degdeg ah. Sida sanduuqa set-top ee Sony, maskaxda Microsoft waxay awood u leedahay inay wax ka qabato saamaynta quruxda badan iyo heerar aad u weyn iyada oo aan la dareemin 4K la soo degsasho.
Ku haboon: Taageerayaasha Nintendo iyo qof kasta oo jecel inuu ku ciyaaro ciyaarta.
Koonsole-ka jeebka ayaa ka hooseeya awoodda konsooleyaasha guriga. Laakiin waxaa kaliya oo la heli karaa sida Ciyaartoyda ugu fiican ee Nintendo sida The Legend of Zelda: Neefta Duurjoogta iyo Super Mario Odyssey. Intaa waxaa dheer, Switch-ka waxaa lagu dhejin karaa TV weyn oo guriga ah, ama isticmaal muraayadda gudaha ku jirta markaad socoto.
Nooca la cusboonaysiiyay, hal-abuurayaashu waxay bixiyaan shaashadda OLED, taas oo si weyn uga sarreysa qaabkii hore marka loo eego tayada sawirka. Bandhigu wuxuu kugu farxi doonaa midabyo qani ah oo leh kala duwanaansho cajiib ah.
Nooca la hagaajiyay wuxuu helay kaydin badan, 64 halkii 32 GB lagu rakibay ciyaaraha. Xusuusta waxaa lagu ballaarin karaa kaarka microSD. Waxaa lagu keenay cag ballaaran oo la hagaajin karo si loo dhigo console-ka miis ama meel kale. Meesha lagu soo xidho waxay leedahay dekedaha USB, HDMI iyo LAN.
Ku haboon: qof kasta oo safar badan laakiin aan rabin inuu qaato laptop.
Kaniini khafiif ah, dhuuban oo awood leh oo leh muuqaal fiiqan, oo ku habboon isticmaalka waxyaabaha ku jira. IPad Air waxay kuu soo dhawaysaa ciyaaraha aad jeceshahay iyo filimada aad gacanta ku hayso. Way fududahay in kiniinkan loo rogo qalab waxbarasho iyo shaqo, kaliya waxaad u baahan tahay inaad iibsato stylus Apple Pencil, kiiboodhka is haysta oo aad ku rakibto codsiyada xafiiska AppStore. Waxqabadku wuxuu ku filan yahay habsami u socodka codsiyada, bilaabista ciyaaraha baahida loo qabo, iyadoo la adeegsanayo tifaftirayaasha kala duwan, iyo xitaa si ka sii badan, mashiinnada shabakadda.
Jiilka afraad ee iPad Air wuxuu leeyahay shaashad 10.9 inch ah oo leh xallinta 2,360 x 1,640 pixels iyo processor A14 Bionic. Kaamirada hore ee 7MP waxay ku timaadaa mid ku anfacaya wicitaanada fiidyaha, halka kamarada 12MP ay kuu ogolaanayso inaad sawiro iyo muuqaalo wanaagsan ka qaadato qaraarka 4K. Batarigu waxa uu soconayaa ilaa 10 saacadood oo daawasho muuqaal ah ama hawlgal browserka ah iyada oo loo sii marayo Wi-Fi qaab offline ah.
18. GoPro Hero10 Madow
Ku habboon: xiiseeyaasha dibadda iyo bloggers.
Mid ka mid ah kamaradaha waxqabadka ugu fiican oo muddo dheer noqday heerka warshadaha. La yaab injineer run ah oo ku jira kiis adag oo aan biyuhu lahayn. Waxay awood u leedahay in ay ku toogto muuqaalka 5K at 60 frames per second iyo 4K at 120 frames per second, iyo sidoo kale qaadashada 23-megapixel sawiro iyadoo la adeegsanayo xasilinta sawirada iyo hababka kor u qaadista sawirka. Tani waxay u oggolaaneysaa natiijooyin cajiib ah oo wax soo saar leh.
Ku haboon: Ciyaartoyda iyo qof kasta oo jecel tignoolajiyada cusub.
Oculus Quest 2 wuxuu kaga duwan yahay muraayadaha VR-ga kale sababtoo ah uma baahna isku xirka aaladaha kale. Kani waa nidaam loo dhan yahay. Way ku filan tahay inaad xidhato koofiyadda, soo qaado kontaroolayaasha, waxaadna ku raaxaysan kartaa xaqiiqada dhabta ah.
Ku habboon : carruurta iyo geeks da' kasta.
Quadcopter-ka-laaban ee is haysta oo leh nidaamka kahortagga isku dhaca, oo ku habboon hawl-wadeennada khibradda leh iyo kuwa aan waligood duulin diyaarad aan duuliye lahayn. Mavic Air 2S waxa uu ku toogan karaa qaraarka 5K, waxa uu xawaarihiisa gaaraya ilaa 49 kiiloomitir saacadii waxa uu awoodaa in uu kor ku sii jiro ilaa 30 daqiiqo isaga oo aan dib u dallacin.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 20 qalab oo qof walba uu jeclaan doono!